0 Wednesday August 25, 2021 - 14:59:13
0 Tuesday July 20, 2021 - 20:24:59
Kumanaan qof muslimiin ah ayaa maanta fagaare kuyaal degmada Jilib ku tukaday salaadda Ciidul Adxaa halkaas oo si weyn looga oogay shacaa'irta Islaamka.
0 Wednesday June 16, 2021 - 16:50:35
0 Thursday June 03, 2021 - 12:05:51
0 Sunday May 23, 2021 - 12:55:34
Waxaa marxalad dhexe maraya dhismaha masjid jaamaca magaalada Bu'aale ee gobolka Jubbada dhexe.
0 Wednesday May 19, 2021 - 11:19:16
Melleteriga Yahuudda Sahyuuniyadda ayaa wali sii wada xasuuqa uu ku hayo shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada Qaza.
0 Tuesday May 18, 2021 - 11:55:15
Fagaara weyn oo ku yaala magaalada Buq'aqable ee wilaayada Islaamiga Hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya waxaa ka dhacay dibad bax ballaaran oo lagu garab istaagayo muslimiinta falistiin fariimo adagna loogu diray yahuuda sahyuuniyadda ah.
0 Saturday May 15, 2021 - 09:28:32
Dhammaan wilaayaadka Islaamiga ah waxaa lagusoo gaba gabeeyay fantasyihii loogu dabaal degayay munaasabadda Ciidul fidriga ee sanadda 1442.
0 Wednesday May 12, 2021 - 11:33:08
Kumannaan dad ah ayaa isugu soo baxay Musalle weyn oo ku yaalla degmada Saakoow ee wilaayada islaamiga ah ee Jubooyinka kuwaas halkaas ku tukaday labada rukco ee salaadda Ciidul Fidriga.
0 Tuesday May 11, 2021 - 17:22:45
Xoogaga muqaawamada Falasdiin ayaa weeraradii ugu cuslaa ku qaaday magaalooyinka ay ixtilaalka ku deganyihiin dadka Yahuudda Sahyuuniyadda.
0 Monday May 10, 2021 - 14:59:42
Ciidamada Yahuudda Sahyuuniyadda ayaa maalintii labaad oo xiriir ah xadgudubyo ka geysanaya magaalada Qudus ee dhulka Falasdiin halkaas oo ay ixtilaal ku haystaan.
0 Saturday May 08, 2021 - 18:57:20
Mas'uuliyiin ka socday wilaayada Islaamiga Galguduud iyo Odayaasha dhaqanka beelaha wilaayada ayaa socdaal ku tagay degmada Bacaadweyne ee gobolka Mudug.
Sawirro: Al Shabaab oo gargaar gaarsiiyay shacab ku tabaalaysan degmada Bacaadweyne.
0 Sunday April 25, 2021 - 21:01:03
Wilaayada Islaamiga Mudug ayaa gurmad ballaaran usameysay boqolaal qoys ah oo ku sugan degmada Bacaadweyne iyo duleedkeeda halkaas oo ay abaaro ku dhufteen.
0 Monday April 05, 2021 - 17:18:44
Sawirro: Masjid Sedax dabaq ka kooban oo laga dhisayo magaalada Bu'aale.
0 Tuesday March 30, 2021 - 18:15:33
Magaalada Bu'aale ee xarunta gobolka Jubbada dhexe waxaa ka socda mashruuc ballaaran oo dib loogu dhisayo masjid jaamaca weyn ee magaaladaasi.
Sawirro: 15 qof muslimiin ah oo ku dhintay dab ka kacay Xuduudda Bangladesh.
0 Wednesday March 24, 2021 - 09:04:26
Waxaa sare usii kacay khasaaraha ka dhashay dab ka kacay xera qaxooti oo kutaal xuduudda ay wadaagaan wadamada Bangladesh iyo Myanmar.
0 Wednesday March 10, 2021 - 11:38:06
0 Thursday February 11, 2021 - 19:59:38
Bur,Bariis,Sonkor,saliid Maro kaneecooyin iyo waxyaabo kale ayaa loo qeybiyay 800 oo qoysas danyar ah oo ku ceyrtoobay fatahaada wabiga shabeelle.
0 Thursday February 11, 2021 - 19:47:55